अबको आन्दोलन र लडाई विकास निर्माण र संमृद्धीको लागि : मेयर राई::समायोजन खबर
अबको आन्दोलन र लडाई विकास निर्माण र संमृद्धीको लागि : मेयर राई
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राई
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले जेठ १६ गतेबाट आफ्नो पक्की भवनदेखी सेवा प्रवाह गरेको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको झण्डै दुई वर्षपछि हलेसी तुवाचुङले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको हो । दुर्छिमको कोटगैरामा निर्माण गरिएको भवनबाट कामकाज थालिएपछि आफ्नै भवनबाट आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नेमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तेस्रो भएको छ । नगरपालिकाको विभिन्न विषयहरुमा रहेर मेयर इवन राईसँग समायोजन खबर डटकमले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ।
यस कार्यालयले प्रवाह गर्ने काम कारबाही अब, कतीको छिटो र छरितो हुन्छ ?
वास्तवमा बिगत वर्षहरु भन्दा अब नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरु प्रभावकारी हुनेछ । किन भने, गतवर्ष हामीसँग आफ्नो नगरपालिकाको नीजि भवन थिएन । साविक वडा नं. ५ को वडा कार्यालयमा एउटा साँघुरो कोठाबाट सबैखाले सेवा प्रवाह गर्दाखेरी सेवाग्राहीहरुलाई समयमा नै काम लिन र दिन हामीलाई नै समस्या थियो । सेवाग्राहीलाई पनि । अब, त्यो स्थिती रहन्न, स्थानीय स्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर थोरै, सानो लागतमा नगरपालिकाले आफ्नै भवन बनाएको छ । त्यसो भएको हुनाले अब, नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु प्रभावकारी हुनेछ ।
हालसम्म आईपुग्दा नगरपालिकाले विकासमा कती फड्को मा-र्यो ? प्रमाणहरु के–के हुन् ?
नगरपालिकाले हामी आईसकेपछि विकास निर्माणमा फड्को मारेका कुराहरु म, आफैले भन्दा त्यति सान्र्दभिक नहोला । यो चाँहि स्थानीय जनताहरुबाटै प्रतिक्रिया लिंदा राम्रो होला । मलाई सोधिहाल्नु भो, त्यसो हुंदाखेरी मैले केही भन्र्नैपर्छ । हामी आउनुभन्दा अगाडीको नगरपालिका र आईसके पछाडी तुलानात्मक रुपमा आकाश जमिनको परिवर्तन भएको छ । किनभने, विकास निर्माणको सन्दर्भमा, सुशासनको सन्दर्भमा, पारदर्शिताको सन्दर्भमा हामीले प्रशस्तै काम गरेका छौ ।
नगरपालिकाको ९० प्रतिशत गाउँबस्तीहरुमा सडक पु-र्याएका छौ । नगर स्तरीय सडकहरु निर्माण गरेका छौ । जो १२ महिना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । ग्रामिण सडकहरु, कृषि सडकहरु निर्माण गरेका छौ । कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनिय सुधार गरेका छौ । हर कृषकहरुलाई परम्परागत प्रणालीबाट गरिने जुन कृषि पेशा,व्यवसाय छ । त्यसलाई परिवर्तन गरेर व्यवसायिक बनाई रहेका छौ । कृषिमा अनुदान सहयोग, प्राविधिक सहयोग गरेका छौ । यहाँका प्रमुख आम्दानीको स्रोत कृषि भएकाले कृषिमा यहाँका नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, वैज्ञानिककरण र व्यवसायिक गराउनतर्फ अगाडी वढिरहेका छौ ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, अनियमित्ता, पार्टी निकटलाई योजना वितरणजस्ता विषयहरु व्यापक चर्चामा छन् । यहाँ कस्तो छ ?
त्यो अरु ठाउँमा के छ म भन्दिन । तर, हाम्रोमा तपाईले भनेजस्तो म कही पनि देख्दिन । अनियमित्ता भएको, भ्रष्टाचार भएको, आफू अनुकुलका कार्यकर्ताहरुलाई योजना दिएको त्यस्तो कही पनि छैन । हामी सिष्टममा छौ, विधि र प्रक्रियामा छौ । त्यस्तो चाँहि थाहा छैन मलाई ।
विकासका सुचकहरु विधुत, सडक, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य हुन् । यि विषयहरुमा के,कस्ता प्रगती भए ?
सडक, कृषिको सन्दर्भमा भनिसके । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगती गरेको छ । फड्को नै मारेको छ । स्वस्थ्य जनशक्ति शाररिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले स्वस्थ्य जनशक्ति उत्पादन निर्माण नगरीञ्जेलसम्म नगरको सबैैखाले विकासमा योगदान पु¥र्याउन सकिन्न भन्ने हिसाबले पहिलो नम्बर हामीले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दियौं । त्यसो हुनाले प्रत्येक वडामा वर्थिङ सेन्टरहरु सञ्चालन गरेका छौ । कुनैपनि महिलाले सृष्टिलाई निरन्तरता दिंदाखेरी मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । असह्य पिडादेखी छटपटिनु पर्ने अवस्था छैन । हामीले नियमित गर्भजाँच गरेका छौ । कोसेली भेट कार्यक्रम गरेका छौ ।
कुराकानीका क्रममा मेयर इवन राई (दायाँ)। तस्विर समायोजन खबर
अब, कुनै पनि आमाहरुले हिजोको जस्तो स्ट्रेचरमा बोकिएर अस्पताल गएर सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छैन । यहि कारण स्वास्थ्यमा प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेका छौ । भुगोल र जनसंख्याको हिसाबले अत्यन्त विकट ठाउँहरुमा, त्यसमा पनि जनसंख्याको हिसाबले बाक्लो जनसंख्या भएको स्थानमा शहरी स्वास्थ्य इकाई केन्द्र सञ्चालन गरेर पनि नगरपालिकाको २/३ स्थानमा स्वास्थ्य चौकीमा आउन नसकेको हकमा त्यहाँबाट पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका छौ ।
विधुतको सन्दर्भमा यो वर्ष हामीले मंगलटारलाई उज्यालो वडा घोषणा गरेका छौ । र, अव आउने आर्थिक वर्षमा १,२,३ र ४ नम्बर वडालाई उज्यालो वडा घोषणा गर्ने अभियान र अर्जुन दृष्टिका साथ लागिरहेका छौ । कामको प्रक्रिया पनि अगाडी बढिरहेको छ । दुईवर्ष पछाडी नगरपालिकालाई उज्यालो नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौ । त्यस्तै, शिक्षामा पनि हामीले उल्लेखनीय सुधार गरिरहेका छौ ।
“राजनीतिक आन्दोलन र लडाई सकियो अबको आन्दोलन,लडाई विकास निर्माण र संमृद्धीको लागि भएको कारणले निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो । प्रक्रियामा गइसकेपछि हारजित हुन्छ । हारजितको मानसिकतालाई त्यागेर सवै राजनीतिक दल, सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिएर मात्रै नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणमा फड्को मार्न सकिन्छ ।”
शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनका लागि भर्खरै मात्र नगरपालिकामा भईरहेको शैक्षिक गुणस्तरको वारेमा नगरभरीका सामुदायिक विधालयहरुको प्रअ, विधालय व्यस्थापन अध्यक्ष, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष, पेशागत संघ संगठन, महासंघसँग बसेर २३ वुंदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छौ । यो शैक्षिक सत्रलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रुपमा लिएका छौ । कार्यन्वयन गर्नका लागि सरल होस, सहज होस, सवैले अपनत्व बोध गरोस भन्ने हिसाबले हामीले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल गरेका छौ । नगरपालिकाले गरेको यस अभियानलाई राजनीतिक दलका साथीहरुले पनि स्वागत योग्य काम भएको भन्दै दलहरुको तर्फबाट सवैखाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नु भइसकेको छ ।
नगरको सबैभन्दा बढी ध्यान केमा रहेको छ ?
नगरको सबैभन्दा बढी ध्यान भौतिक विकास निर्माणमा गएको छ । र, आगामी आर्थिक वर्षबाट भने, मानवीय संसाधनको विकासलाई जोड दिएर अगाडी बढ्नेछौ । भौतिक विकासले मात्रै विकास र संमृद्धि प्राप्त हुदैन । भौतिक विकासलाई संरक्षण गर्न, दिर्घकालिन हिसाबले उपभोग गर्न, त्यसको प्रभावकारिता बढाउनको लागि पनि मानवीय क्षमता र चेतनाको आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यतातिर लाग्ने छौ । अर्को कुरा अब, हामीले भौतिक विकास निर्माण नगरपालिकाले जे, जति गरेको छ । त्यसलाई हाम्रो आम्दानीका स्रोत बनाउनका लागि कृषिजन्य उत्पादन, उधोगधन्दामा पनि नगरपालिकाको ध्यान, दृष्टि त्यतातिर जानेछ ।
यो नगरपालिका सुख्खा क्षेत्र पनि हो । यसमा केन्द्रको बजेट पनि आएको छ । त्यसमा नगरपालिकाको समन्वय कस्तो र प्रगती कस्तो भईरहेको छ ।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्र शुसिल कोईराला प्रधानमन्त्री हुंदा घोषणा भएको छ । ११ वडा साविकका गाविसहरु मिलेर नगरपालिका बनेको हो । सात गाविसहरुलाई सुख्खाक्षेत्र घोषणा गरिएको छ । थप चार गाविसलाई सुख्खाक्षेत्र भित्रै घोषणा गरेर त्यसको प्राथमिकतामा राखेर काम गराउन हामीले विभिन्न प्रेसर, दबाब दिइरहेका छौ । अनुगमन र डेलिगेसन गरिरहेका छौ । यसको संयोजक म, आफै भएकाले अहिले काम द्रुत गतीमा अगाडी वढिरहेको छ । चार गाविसलाई पनि समेट्न कोशिस र पहल गरिरहेका छौ । यो सुख्खाक्षेत्र खानेपानीका ठूलो अभाव छ । खानेपानीको अभावकै कारणले गर्दाखेरी वर्षेनी कयौं घरहरु बसाइसराई जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि नगरपालिकाले खानेपानीको हकमा तीनवटा विकल्प अगाडी सारेका छौ ।
जस्तो, स्थानीय स्तरमा भएको सानातिना स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने, संम्भावना भएसम्म भुगर्व विदहरुलाई बोलाएर विभिन्न ठाउँहरुको सर्वे गरिरहेका छौ । त्यो चाँहि डिप बोरिङबाट पनि अस्थाई रुपमा खानेपानीको विकल्पहरु समाधान गरिरहेका छौ । गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौ । र, त्यस्तैगरी मध्यमकालीन् विकल्पको रुपमा भइरहेको जे,जति स्रोत, साधन छन् । ति स्रोत, साधनलाई संरक्षण गरेर, ति स्रोत, साधनलाई व्यवस्थित गरेर परिचालन गरिहरेका छौ । दिर्घकालिन ढंगले यहाँको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि नगरपालिकाको आफ्नो नारा छ । ‘एक घर, एक धारा’ यो अभियानलाई साथ दिन र सार्थकता बनाउनका लागिरहेका छौ ।
दिर्घकालीन् ढंगले खानेपानी समस्याको समाधान भनेको चाँहि लिफ्टिङ नै हो । दुधकोशीबाट पानी लिफ्टिङ गरेर वितरण गर्ने प्रक्रियामा छौ । किनभने, भुगोल प्रकृतीले हामीलाई ठगेको छ । अन्य हामीसँग खोलानालाहरु पर्याप्त मात्रामा नभएकाले कोशीको पानी लिफ्टिङ गरेरै वितरण गर्ने क्रममा छौ । यसले द्रुत गतीमा काम अगाडी बढाइरहेको छ । टेण्डरहरु लागि सकेको छ । तर, वार्षिक रुपमा काम गर्नका लागि जति बजेट स्वीकृत भए आउछ । त्यो चाहिँ सङघीय सरकारबाट अपर्याप्त मात्रामा बजेट बिनियोजित भएको कारणले अलि धेरै समयमै काम सम्पन्न नहुने कि भन्ने शंका चाहिँ उत्पन्न भएको छ ।
ठ्याक्कै खुशी नाप्ने, सन्तुष्ट नाप्ने, सर्वेक्षण गर्ने नगरपालिकासँग त्यस्तै यन्त्र छैन । तर, ससर्ती हेर्दाखेरी हाम्रो कामबाट जुन जनताले हामीलाई भरोसा र विश्वास गरेर ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिनुभएको छ । त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका छौ । र, जनताको हित र जनताको चाहाना छ । विकास निर्माणप्रतीको अभिलासा छ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिहरेका छौ । जनताप्रती पुर्णरुपमा हामी उत्तरदायी छौ,जवाफदेयी छौ, पारदर्शी छौ ।
त्यसो भएको हुनाले आजको दिनसम्म नगरपालिकाको काम कारबाहीप्रती जनताहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने छैन । उहाँहरु सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । नगरपालिका आइसकेपछि हामी विभिन्न कामबाट असन्तुष्ट भयौ, जनप्रतिनिधिहरु हामीप्रती उत्तरदायी भएन, काममा पारदर्शीता भएन भन्ने त्यस्तो सुनिएको छैन । कहिलेकही राजनीतिक प्रतिषोधी भावनाले आउनु त्यो अलग कुरा हो । तर, समष्टीगत रुपमा हेर्दाखेरी हामीबाट र हाम्रो कामबाट जनताहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बिश्वास छ ।
नगरवासीले तपाईहरुबाट के अपेक्षा गर्ने कार्यकाल अवधिमा ?
विकास निर्माण, सुशासन, पारदर्शी, जनप्रतिनिधि जवाफदेयी, उत्तरदायी होस र संमृद्धिको उहाँहरुले चाहाना राख्नु भएको छ । त्यो चाहानालाई प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गरिरहेका छौ । विधुत, सडक, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतमा राखेर काम गरिरहेका छौ । यि पाँच वटा पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार शिक्षा पनि हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यही कारण शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले सुधार होस भन्ने जनताको अपेक्षा छ । उहाँहरुको चाहानालाई पूरा गर्नका लागि हामी कुनै पनि कसुर वाँकी नराखीकन सर्वदलीय छलफल गरेका छौ, पेशागत संघ संगठनका शिक्षक र अभिभावहरुसँग वसेका छौ । र, सवैखाले सरोकारवालाहरुसँग वसेर हामी काम गरिरहेका छौ । यि पाँच पुर्वाधारमा नै उहाँहरुले प्राथमिकता राख्नुभएको छ । हामीले पनि त्यही प्राथमिकतलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी ढंगले उहाँहरुको जुन किसिमको चाहाना, ईच्छा त्यो पूरा गर्नका लागि हरपल तल्लिन छौ ।
बाँकी कार्यकालभित्रमा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ।
नगरपालिकालाई विकास निर्माणका हिसाबले, भौतिक बिकासका हिसाबले, मानवीय क्षमता र चेतनाको हिसाबले, मानवीय संसाधनको हिसाबले नमुना नगरपालिका बनाउनका लागि हामी लागिरहेका छौ । हलेसीको बृहत्तर गुरुयोजना बनाएर अगाडी बढिरहेका छौ । आवधिक योजनाहरु बनाएर अगाडी बढिरहेका छौ । यो नगरपालिका धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले असाध्यै महत्वपुर्ण नगरपालिका हो । त्यसो भएको हुनाले हामीसँग अथाहा संम्भावनाहरु छ । ति संम्भावनाहरुको हामीले खोजी पहिचान गरिसकेका छौ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित र उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ अब हामी लाग्छौ । समग्रमा अबको तीनवर्षको कार्यकालमा दुईवर्ष अघि जुन सपना, चाहाना र भरोसा देखेर जनताले हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाउनुभयो । हामी ति सवैखाले कुरा पु¥र्याउने हेतुले काम गरिरहेका छौ । त्यो पु¥र्याउन सक्छौ भन्ने लागेको छ ।
काम गर्नलाई अप्ठ्यारा र चुनौतीहरु के–के छन् ।
समस्या कहाँनिर छ भन्नु हुन्छ भने । लामो समय पछाडी सङघीय संरचनामा हामी गएका छौ । यो नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक हो । त्यसले गर्दा कहिलेकही हामीलाई काम गर्नका लागि जनताले हाम्रो माध्यमबाट देखेको परिवर्तन र संमृद्धिको जुन सपना छ । त्यो पूरा गर्नको लागि यो नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था भएको कारणले कतीपय कुरामा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैनौ । जस्तो हामीसँग अहिले पर्याप्त मात्रामा मानवीय जनशक्ति छैन । स्रोत साधनहरु छैन, दुई वर्षपछि भर्खरै मात्रा हामीले आफ्नो नगरपालिकाको भवन बनाएर सरेका छौ । र, कतीपय ऐन, कानुनको समस्याहरु छन् । नीतिगत समस्याहरु छन् । सङघीय ऐनहरु नबन्नुका कारणले गर्दा क्षेत्राधिकारका विषयमा लडाई हुने, कहिलेकही राजनीतिक प्रतिषोधी भावनाका कारणले गर्दाखेरी पनि जनप्रतिनिधिहरुको विचमा द्धन्द सिर्जना हुने भएको कारणले गर्दाखेरी केहीकेही समस्या छ ।
ति समस्या समाधान गर्नको लागि हामी राजनीतिक हिसाबले समन्वय र सहकार्य गर्नको लागि नगरपालिकाले अगुवाई गरिरहेको छ । राजनीतिक आन्दोलन र लडाई सकियो अबको आन्दोलन र लडाई विकास निर्माण र संमृद्धीको लागि भएको कारणले निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो । प्रक्रियामा गइसकेपछि हारजित हुन्छ । हार र जितको मानसिकतालाई त्यागेर सवै राजनीतिक दल, सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिएर मात्रै नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणमा फड्को मार्न सकिन्छ भनेर नगरपालिकाले आफ्नै अगुवाईमा स्थानीयस्तरमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय र छलफल गरेर अगाडी वढिरहेको छ ।
कहिलेकही राजनीतिक प्रतिषोधका कारण नगरपालिकालाई विरोधका लागि विरोध हुने गर्छ । तर, पनि म उहाँहरुलाई आग्रह के गर्न चाहान्छु भने नगरपालिकाले विशाल ह्रदयका समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडी बढाउने वातावरण निर्माण गरेको छ । त्यसो हुनाले सवै दलहरुलाई नगरपालिकाले जुन किसिमको अभियान छ । विशुद्ध हिसाबले राजनीतिक भन्दा माथि उठेर समग्र यहाँको जनताको हितलाई प्राथमकितामा राखेर अगाडी वढिरहेको छ । यो अभियानमा होमिदिन र नगरपालिकाको जुन किसिमको भिजन र दृष्टिकोण अगाडी सारेको छ । यसमा सरिक भइदिनको लागि सवैलाई आव्ह्वान गर्न चाहान्छु ।
विशेषगरी नगरवासीहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने, हामी विभिन्न समस्यामा छौ । अभावै अभावले थिचिएका छौ । हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधानहरु छैन, मानवीय जनशक्तिहरु छैन । व्यवस्थापनहरु छैन । ऐन, कानुनको समस्या छ । यद्यपी, यि सबैखाले समस्याको विचमा बसेर पनि हामीले प्रभावकारी ढंगले जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौ । त्यसो भएका हुनाले गर्दाखेरी धेरै निराश नहुन र नगरपालिकाले अगाडी सारेका सबैैखाले गतिविधिमा सकारात्मक ढंगले सहयोग गरिदिन तथा नगरपालिकाबाट कहिलेकही अन्जानमा भएका त्यस्ता केही कमि कमजोर छन् भने ति कमजोर औल्याईदिएर सुध्रने वातावरण निर्माण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु । प्रस्तुती चिसाङ शेर्पा
२०७६ जेठ २७ गते मध्यान्ह १२ :२० मा प्रकाशित